Todobaadka Murugada: WWE oo maanta nin culus weysay xilli uu ka dhawaajiyey inuu isaga hayaamay shirkadaas. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Maxaa Cusub » Todobaadka Murugada: WWE oo maanta nin culus weysay xilli uu ka dhawaajiyey inuu isaga hayaamay shirkadaas.
Todobaadka Murugada: WWE oo maanta nin culus weysay xilli uu ka dhawaajiyey inuu isaga hayaamay shirkadaas.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 8-08-16 7:52 PM “Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 8 da August 2016 ka, waxa ay shirkadda WWE ga iclaamineysaa inuu soo idlaaday qandaraaskii ay shirkadda kula jirtay Rayback. Dadaal aan dhamaan ban u rajeyneynaa Rayback Mustaqbalka” Sidaas waxaa lagu xusay Bogga rasmiga ah ee WWE.
Legdan yahay culus ayaa Jimcihii soo saaray muuqaal uu ugu rajeynayo guul shirkadda Musaaracada mustaqbalka, waxa uuna Rayback u weecan doonaan qaabkii uu ku hormarin lahaa Website ka uu sameystay ee FeedMeMore.com kaas oo hawada soo galay maanta.
Xavier Woods ayaa dhawaan Boggiisa Twitter ka kusoo xusay inuu hayo wadadii uu ku hormarin shirkadiisa soo saarta Video Games, waxa uuna Xavier xusay in arintaas ay weligiis u ahaan jirtay Riyo balse u rumowday, Xavier waxa uu u helay Channel kiisa Youtube ka 640 Kun oo Raacayaal (640,000 Subscribers).
Sidoo kale waxaa xusid mudan in Emma oo dhaawac kaga maqneyd WWE tan iyo bishii May ay bilowday dhawaan tababar culus iyada oo isku diyaarineyso in waqtiyada ina soo aadan ay kusoo laabato WWE,.